Taorian'ny tantara ratsy Weinstein dia nesorin'i Apple ny biopika Elvis Presley | Vaovao IPhone
Taorian'ny tantara ratsy Weinstein dia nesorin'i Apple ny biopika Elvis Presley
Apple dia nanao Nofoanana ny tetikasa ho an'ny andian-tantara biografika miorina amin'ny fiainan'ny mpanakanto Elvis Presley Novokarin'ny The Weinstein Company izany, ary naseho voalohany tao amin'ny serivisy mozika mivantana an'ny Apple Music, taorian'ny vehivavy maro niampanga ny mpanorina ny Weinstein Company Harvey Weinstein ho fanorisorenana ara-nofo.
Navoaka tamin'ny alàlan'ny Deadline ny fampahalalana tany am-boalohany, fampitaovana izay, manondro loharanom-pahalalana mahalala an'io raharaha io, dia miantoka izany ilay tetikasa voalaza etsy ambony dia mbola teo am-piandohan'ny fampandrosoana Nanomboka volana vitsivitsy lasa izay izy ireo.
Apple Music tsy misy biopic Elvis
Ny fifanarahana Apple Music dia vita sonia talohan'ny nananganana orinasa Cupertino fizarana horonantsary tamin'ny volana Jona lasa teo, ka tamin'io fotoana io no nananganana ilay orinasa nanakarama an'i Jamie Erlicht sy Zack Van Amburg, samy mpitantana taloha tao amin'ny fahitalavitra Sony Pictures Television.
Kely ny antsipiriany momba ity tetikasa ity, na dia nilaza aza ny loharanom-baovao voatondron'ny Deadline fa misy ny tsaho mety ho lasa franchise biografika ny tetikasa, angamba manarona ny fiainana sy ny asan'ireo mpanakanto malaza hafa toa an'i Prince sy Michael Jackson. Na izany aza, ny lisitr'ireo fiampangana momba ny fanorisorenana ara-nofo mihatra amin'ny mpanorina TWC Harvey Weinstein dia mety handrisika an'i Apple handray fanapahan-kevitra hanafoana ilay tetikasa fiaraha-miasa miaraka amin'ny The Weinstein Company izay, tamin'ny 2016, nahazo fidirana amin'ny zon'ny mozika. An'ny Elvis Presley ary na ny fidirana amin'ny ny fananany, ao anatin'izany ny tranony Graceland, fiara, akanjo sy jet, hamoronana andiam-pahitalavitra 8-10
Ny herinandro lasa teo dia namoaka ny a New York Times a tatitra manazava amin'ny antsipirihany mikasika fitarainana maro momba ny fanorisorenana ara-nofo, maro amin'ireo no milaza fa Weinstein dia nilaza fa nanararaotra ny toerany amin'ny maha mpikambana ao amin'ny Hollywood sangany. Ity fampahalalana ity dia nahatonga an'i Weinstein nametra-pialana talohan'ny nandroahan'ny filankevi-pitantanana azy ny alahady teo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Taorian'ny tantara ratsy Weinstein dia nesorin'i Apple ny biopika Elvis Presley
Ny iPhone X voalohany dia manomboka hita eny amin'ny arabe
Apple hanokatra birao ao amin'ny Station F, «incubator startup lehibe indrindra eto Eropa»